Nepali Viral Contents Around the World - Nepali Virals
नेपाल सरकारले विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीलाई देखाएर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अष्ट्रेलिया सहित पाँच…
ब्युटी अर्थात् सुन्दरता, सुन्दर हुन को चाहँदैन यो संसारमा? सुन्दर देखिन अनि भनिन चाहनेको संख्या जति …
लिची खाँदा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यसको बीउ (गेडा) जुन हामीले खाने भागको भित्र आकारमा पन…
१. जापान, जोर्डन र स्यान मरिनो यी तीन देशहरूका राष्ट्रगानमा केबल ४-४ लाइन छ । २. इटाली र फ्रान्सले व…
सबैलाइ थाह छ फेब्रुअरी १४ तारिख विश्वभरि नै प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेन्टाइन डेका रूपमा मनाइन्छ । याे…
हालसालै अपडेट भएका
जंगबहादुर राणाले बेलायतमा दुहुनो गाई लगेपछि…(पढ्नुस १० चर्तिकला)
२५ चैत्र २०७२, बिहीबार १४:२६	0 669
नेपाली इतिहासमा कहिल्यै बिर्सिन नसकिने खलनायक हुन् जंगबहादुर राणा । उनको ’boutमा शासनकालमा मात्रै होइन अझै पनि उतिक्कै चर्चा हुन्छ । वि.सं १९०३ मा श्री ५ लाई हटाई श्री ३ को इतिहास सुरु गरेका उनी आफ्नो जीवन भर विभिन्न कारणले चर्चामा रहे । जंगबहादुर ज्यूँदै बाघ समात्थे रे, धरहराको टुप्पोबाट हाम फाल्थे रे, वाढी आएको बागमतीमा हाम फाल्थे रे’ भन्ने चर्चा गर्ने गरेको हामीले सुन्दै आएका छौ । जंगबहादुर राणाका छोरा पद्यम जंगबहादुरले आफ्ना पिताको डायरीको आधारमा लेखेको पुस्तक ‘लाइफ अफ महाराज सर जंगबहादुर’मा अनेकौं चर्तिकलाहरु उल्लेख गरेका छन् । यस्तो छ उनको १० चर्चित चर्तिकला १. जंगबहादुरको पालामा देशमा करिव करिव तीन थरी शासन चलेको थियो । राजा, रानी र राजकुमारले तीनथरी शासन चलाउन थालेका थिए । त्यही चरबाट उनी देशको मुख्य शासन आफ्नो हातमा लिन सफल भए । २. पारिवारिक पृष्ठभूमि सैनिक भएकाले जंगबहादुर घोडचढीका निकै सौखिन थिए । उनी जहाँ जता जानु परे पनि घोडामै सवार हुन्थे । जहाँ पुगेपनि शिकार खेल्ने मूडमा हुन्थे । त्यसैले उनी गोला बारुद र बन्दुकको सम्पूर्ण बन्दो बस्त गरेर हिड्थे । शिकारी मानसिकता भएकै कारण उनले बम्बईबाट ३० वटा अरब जातका घोडा मगाएका थिए । ३ जंगबहादुर १८५३ मे २६ को गर्मीको दिन बद्रीनाथ दर्शन गरेर फर्कने क्रममा उनले सिमाना देखि काठमाडौंसम्म १ सय ९ माइल लामो यात्रा निरन्तर घोडामा गरेका थिए । उक्त यात्रामा १२ वटा घोडा बदलेका थिए । ४. उनी पढ्ने तिर भन्दा बन्दुक, युद्ध, घोडचढी, खेलकुदमा बढि ध्यान दिने दिन्थे । ५. एकदिन दरबारको जग्गा कमाउने किसानहरुले तुसारोको कारण बाली नष्ट भएकाले त्यस बर्षको तिरो र मालपोत मिनाहाको विषयमा मन्त्रिपरिषदमा विवाद भयो । त्यसबेला उनी मन्त्री परिषदको सदस्य थिए । प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा उचित कदम चाल्न नसकेपछि जंगबहादुरले त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि मामा–भाञ्जा ‘माथवर र जंगबहादुर’ बीच चर्को भनाभन चल्यो । जंगले भने–‘यो निर्णय एकदमै केटाकेटी भयो । मलाई केटाकेटी नठान्नुहोस ।’ अनि यसमा राजा र राजकुमारले पनि जंगको पक्ष लिएपछि माथवरको मुख बन्द भयो । ६. जंगबहादुर नेपालबाट निस्किएको चार महिनापछि बेलायत पुगेका थिए । पछि उनी फर्किंदा नेपाली कला, संस्कृति, जनजीवन र कानूनमा समेत पश्चिमी प्रभाव प्रसस्त बोकेर फर्किए । ७.जंगबहादुरको भ्रमणमा निस्केको टोलीले चिसापानीगढीको बाटो हुँदै पत्थरघट्टा पुगेको थियो । जहाँ उनीहरुले १५ दिनसम्म बाघ र हात्तीको शिकार गरेर …
यी हुन् नेपालमा कर छलेर विदेशमा पैसा थुपार्ने १३ नेपाली
२४ चैत्र २०७२, बुधबार १८:३८	0 695
पानामा पेपर्सको खुलासापछि अहिले बिश्वभर तहल्का मच्चिएको छ । खुलासामा बिभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, खेलाडीदेखि कलाकारहरुका समेत नाम मुछिएका छन् । पानामाको खुलासापछि आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा समेत दिइसकेका छन् । ७६ देशका १०९ समाचार संस्थासग मिलेर गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । यी १३ नेपालीले पनि कर छलेर विदेशमा पैसा थुपारेको खुलासा भएको छ । पढ्नुस.....
२४ चैत्र २०७२, बुधबार १३:५०	0 4,798
महिलाको सम्बन्धलाई पुरूष सफलतासँग जोडेर हेर्दा समाजले लच्छिन र अलच्छिनको कुरा गर्छ। नेपाली समाज धेरै लामो समय देखी मानिसको शरिर, व्यवहार र सोचलाई लच्छिन र अ﻿﻿लच्छिनको आँखाले हेर्छ। त्यसैले त छोराको लागी बुहारी खोज्न निस्कने अभिभावकले केटीको आँखा कैलो छ कि छैन खुट्टामा रौं छ कि छैन हेर्छन। अनि केही लच्छिनकी हुने की अलच्छिनको हुने पत्तो लगाउँछन्। यसरी महिलाको अंग तथा व्यवहारबाट मानिस पत्तो लगाउने चलन नेपालमा मात्र होईन विकसित र वैग्यानिक भनेका यूरोप र अमेरिकामा पनि छ।
थाइल्यान्डको १० रोचक तथ्य (फोटोफिचर)
२३ चैत्र २०७२, मंगलवार १२:२२	0 566
विश्वका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तब्य मध्ये एक हो थाइल्याण्ड । थाइल्याण्ड घुम्ने धेरैको रह हुन्छ । थाइल्यान्ड संसारभरिमा घुम्नको लागि लोकप्रिय छ । थाइल्यान‍डमा ७५ प्रोभिन्स (प्रान्त)छ भने थाइलेडं हात्तीको सुंड जस्तो देखिन्छ यो अधिराज्य र नेपालका विच पुरानो सम्बन्ध रहेको छ । यहाँको भ्रमणका लागि जहाज भाडा खर्च प्रतिव्यक्ति करीब ३० हजार रुपैयाँ लाग्दछ। ६ दिनमा थाइल्याण्डका प्रयाप्त ठाउँहरुमा घुम्न सकिन्छ। १ हजार नेपाली रुपैयाँमा एक रात विताउनका लागि होटल पाइन्छ । बैंकक, पटटाय, कोरल आइल्याण्ड, बौद्ध मन्दिर, फ्लोटिङ बजार घुम्नका लागि प्रख्यात ठाउँहरु हुन् । थाइल्यान्ड घुम्न जाने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईले थाइल्यान्डको बारेमा केही जानकारी पक्कै लिएर जानुहोला । यसले तपाईलाई थप उत्साह र अविस्मरणीय बनाउछ ।
२२ चैत्र २०७२, सोमबार १५:१७	0 1,494
आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चा स्वास्थ्य होस्, चिटिक्क राम्रो होस्, कुनै खोट नहोस, हेर्दै लोभलाग्दो होस् र आफु भन्दा पनि राम्रो सुन्दरता होस भन्ने हरेक जोडीको चाहना हुन्छ । तर सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र । पेटमा भएको बच्चा कस्तो छ भन्ने उत्सुकता त हुन्छ नै साथै बच्चा जन्मेपछिको यथार्थ पनि सुखद मात्रै हुदैन कतिपयका लागि दुखद पनि हुन् पुग्छ । अस्वस्थ्य बच्चा जन्मिने, अपाङ्ग तथा विकलांग बच्चा जन्मिने इत्यादी कारण अभिभावकहरु चिन्तित हुन्छन । तर अब यस्तो सबै समस्याबाट समाधान हुने भएको छ । अब तपाइले जस्तो बच्चा चाहनु भयो त्यस्तै बच्चा जन्माउन सक्नु हुन्छ । जसलाई डिजाइनर बेबी भनिएको छ ।
२२ चैत्र २०७२, सोमबार १३:५२	0 453
रेकर्ड भन्ने बितिक्कै एकदमै गार्हो र चमत्कार भन्ने अर्थ लाग्छ । कुनै पनि कुराको रेकर्ड राख्नु चानचुने कुरो होइन अझं रेकर्ड तोड्नु त असम्भबप्राय: कुरा हो । तर कतिपय व्यक्तिहरु यस्ता हुन्छन जसले थुप्रै रेकर्डहरु राखेका हुन्छन । आफ्नो र अरुको रेकर्ड तोड्न मरिहत्ते गर्छन र सफलता प्राप्त गर्छन । कतिपय रेकर्डहरु यस्ता पनि हुन्छन जुन सुन्दै आङ जिरिङ् हुन्छ । सामान्य मानिसको कल्पना भन्दा पनि बाहिरकजा रेकर्डहरु समेत राखेका हुन्चाहं कतिपयले । त्यसो त गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रिकर्डमा यी र यस्ता थुप्रै रेकर्डहरु छन् जसमध्ये पनि अनौठो, अपत्यारिलो र दुनियाँलाई नै चकित पार्ने ४ रेकर्ड यस्तो छ ।
२१ चैत्र २०७२, आईतवार १६:२७	0 1,521
वार्डरोव मलफङ्सनबाट धेरै सेलिब्रेटी पिडित छन् । आफुलाई पत्तो नभई हुने यस्ता मलफङ्सनले सेलिब्रेटीहरु हत्तु हैरान नै हुन्छन । नेपालका सदाबहार नायिका मानिने करिश्मा मानन्धरदेखि अहिलेका हिट हिरोइन प्रियंका कार्कीसमेतको मलफङ्सन सार्वजनिक भएका छन् ।हेर्नुस बिश्वभर भाइरल बनिरहेको भिडियो
२१ चैत्र २०७२, आईतवार १३:२४	0 843
धेरैको टाउको दुखाइको बिषय बन्ने गर्छ तौल बढ्नु । तौलसंगै भुँडी बढ्यो भने झन् थप समस्या आइ पर्छ । तौल बढेर बिभिन्न समस्याहरु निम्तिनु झन् पीडा माथि पीडा नै भयो । तौल बढेपछि रोगहरुको उपचार गर्नु भन्दा पनि तौल घटाउनु मुख्य कुरा हो । तौल नघटाए रोगको उपचार असम्भब प्राय: हुन्छ । तर अचम्म त के छ भने तौल घटाउन त्यति सहज छैन । जे जस्तो सुकै गर्दा पनि तौल घटाउन नसकेर हैरान हुनेहरुको जमात पनि बाक्लो छ । तौल घटाउन औषधि खानेदेखि बिहान सबेरै कुद्नेहरुको लाइन छ । तर स्मरणीय कुरा के हो भने मौसम अनुसारको तरिका अपनाउन सके तौल नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । अहिले गर्मीको मौसम छ । गर्मीको समयमा यी काम गर्नुस तपाइलाइ तौल घटाउन अवश्य नै सहयोग मिल्नेछ ।
सर्टको टाँक: पुरुषको दाहिने, महिलाको देब्रे किन ?
२१ चैत्र २०७२, आईतवार १०:४८	0 647
के तपाइले ख्याल गर्नु भएको छ ? पुरुषले लगाउने सर्टको टाँक र महिले लगाउने सर्टको टाँक दायाँ र बाँया हुन्छ । जहिले पनि पुरुषले लगाउने सर्टको टाँक दाहिने र महिलाले लगाउने सर्टको टाँक देब्रपटि लगाइएको हुन्छ । तर के तपाइलाई थाहा छ यस्तो किन हुन्छ ? यसको पछाडी कुनै दैनिक क्रियाकलापसंग जोडिएको कारण हो वा शारीरिक वनावट मुख्य कारण हो ? यसका बारेमा बिभिन्न धारणाहरु पाइन्छ ।
२१ चैत्र २०७२, आईतवार १०:१८	0 7,327
पाइखाना, चर्पी, ट्वाइलेट, बाथरुम, वाशरुम, रेस्टरुम अर्थात सिंगल प्राइभेट रुम । जे भने पनि फोहोर त्याग्ने ठाउँ । समय र परिस्थिति अनुसार यसको नाम फेरिदै आएको छ । पछिल्लो समय ब्यस्त जीवनशैलीका कारण बाथरुम रेष्टरुम बन्न पुगेको छ । कामै कामले थिचिएको दैनिकीमा रेष्टरुम पसेर एकैछिन भए पनि शरीरले आराम पाउछ । तर कतिपय भने यो टाइमलाई पनि सदुपयोग गर्न मोबाइल फोन बोकेर बाथरुम पस्छन । बाथरुममा पसेको मान्छेले के गर्छ भनेर सोच्नु मूर्खता हुन् सक्छ किनकी यो सबैलाई थाहै भएको कुरा हो । तर पनि कतिपय कुराहरु अचम्म लाग्दा हुन्छन । बाथरुमको विषयमा हामी धेरै चुट्किला र गहन कुरा सुन्न पाउँछौं । भनिन्छ, बाथरुममा नै मानिसलाई अनेकौं सिर्जनशील कुरा फुट्छ । त्यसो त कतिपय चर्चित सिर्जनाहरु बाथरुममै फुरेको सर्जकहरु स्विकार्छन । साहित्यिक रचना, सांगेतिक रचना, फिल्म स्क्रिप्ट देखि भविष्यका योजनाहरु समेत बाथरुममा बन्ने गरेको छ । बाथरुम गएको बेला मानिसलाइ एककिसिमको आनन्द र शान्ति महसुस हुन्छ । अध्ययन सर्वेक्षणहरुले पनि देखाएको छ कि पुरुषको तुलनामा महिलाहरु बाथरुममा धेरै समय बिताउछन । अझ नुहाउन बाथरुम जाँदा झन् बढी समय व्यतित गर्छन । त्यसो त कतिपयलाई लाग्न सक्छ महिलाहरु बाथरुम पसेर के के सोच्दा हुन् ? अझ युवतीहरुको बाथरुम मन्त्र के होला ? यो धेरैको जिज्ञासाको बिषय हो । यस्तो छ युवतीहरुले बाथरुममा सोच्ने ११कुरा
मोदीले रुदै भने- ‘सुशील कोइरालाले मलाई फसाए’ भारतमा भाईरल भयो भिडियो
१९ चैत्र २०७२, शुक्रबार ०५:३६	0 6,879
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालसँग सम्बन्धित एउटा गोप्य भिडियो यतिखेर भारतमा भाईरल भएको छ। नेपालको संबिधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै भारतले करिब ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्यो । यसले नेपाली जनता चरम मारमा परे । नाकाबन्दीका कारण अत्याबश्यक औषधिदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको अभावले नेपालीहरुले थुप्रै सास्ती खेपे । आयात निर्यात ठप्प हुँदा अर्बौको ब्यापार घाटा भयो । नाकाबन्दी हटेको लामोसमय बित्दा पनि खाना पकाउने ग्यास लगायतको इन्धन अझै सहज हुन् सकेको छैन । यसले आम सर्वसाधारणको दैनिकी अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । भारतले नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न बिश्व समुदायलाई समेत गुहारेका छन् । उनले बेलायत लगायतका मुलुकहरुलाई दबाबमा पारि नेपालबिरुद्द बिज्ञप्ति निकाल्न लगाएका थिए । यद्यपि भारतले अझै नाकाबन्दी गरेको स्वीकार गरेको थिएन तर आज बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसंग माफी मागेका छन् । उनले यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरुले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको पाप स्वरूप हत्या भएको सपना देखेकाले बिहान उठ्ने बितिक्कै एक भिडियो संदेश जारी गर्दै माफी मागेका हुन् ।
१९ चैत्र २०७२, शुक्रबार ०४:४७	0 1,907
प्रचण्ड, अर्थात् पुष्पकमल दहाल। वर्तमान एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष। वास्तवमा उनी जत्तिको नेता र उनको जत्तिको सफलता नेपालको राजनीतिमा सायदै कसैले पाएको थियो। उनी नेपालको राजनीतिका एकमात्र यस्तो नेता हुन् जसले आफैले कल्पना गरेको भन्दा ठूलो सफलता छोटो समयमा पाए र त्यति नै छोटो समयमा गुमाए पनि। कुनै समयमा ‘प्रचण्डको आदेश’ भन्नासाथ युवा तथा कार्यकर्ता मर्न मार्न तम्सिन्थे। साँच्चै प्रचण्ड ‘प्रतापी’ नै भएर उदाएका थिए। माओवादीको भन्दा फरक विचार राख्नेले गाऊँमा बास त परैको कुरा उस्तै परे सास नै गुमाउने अवस्था सकिएपछी भने माओवादीको डर घट्दै गयो साथै माओवादी बारेका भ्रम पनि तोडिए साथै प्रचण्डको करिश्मा नि हराउँदै गयो।
१८ चैत्र २०७२, बिहीबार १३:४२	0 422
आज (बुधबार) नेपाली समयअनुसार ७:४५ बजे भारत र वेस्टइन्डिजबीच टि २० बिश्वकपको दोस्रो सेमिफाइनल भिडन्त हुदै छ । यस खेलमा जित हात पार्ने टोलीले अप्रिल ३ मा हुने उपाधि भिडन्तमा इंगलैंडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । भारत-वेस्टइंडीजबीचको खेलमा दर्शकको विराट कोहली र क्रिस गेलमा पर्ने छ । कोहली भारतीय टोलीका सबै भन्दा सफल ब्याट्सम्यान हुन् भने क्रिस गेल वेस्टइन्डिजका विस्फोटक ब्याट्सम्यान हुन् । यी दुईबीचको मुकबाला रोमान्चक हुने अनुमान गरिएको छ । हेर्नुस आजको खेल’bout १० तथ्य १ . टि २० बिश्वकपको इतिहासमा यी दुई टोली फाइनल प्रवेशका लागि एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको यो नै पहिलो अवसर हो । २ . टि २० बिश्वकपको समुह चरणमा भारत र वेस्टइंडीज ३ पटक (२००९, २०१०, २०१४ ) आमने-सामने भएका छन् । जस मध्ये वेस्टइन्डिजले दुई खेल जित्यो भने भारतले एक खेलमा बिजयी हात पार्यो । 3. यी तिनै खेल हुँदा भारतीय टोली महेन्द्र सिंह धोनीको लप्तनीमा थियो भने वेस्टइन्डिजको तर्फबाट २००९ र २०१० को खेलमा क्रिस गेलले टोलीको कप्तानी गरेका थिए । २०१४ को खेलमा भने डेरेन सेमीले टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । 4.यी खेलमा सर्बाधिक व्यक्तिगत रनको रेकर्ड क्रिस गेलको नाममा छ । उनले २०१० को टि २० बिश्वकपमा ६६ बलमा ९८ रन बनाएका थिए । जसमा ५ चौका र ७ छक्का सामेल थिए । 5. उत्कृष्ट बलिंग तर्फको रेकर्ड पनि वेस्टइन्डिज कै नाममा छ । २००९ को खेलमा ड्वेन ब्रावोले ३८ रन दिएर ४ विकेट लिएका थिए । जुन यी दुई टोलीबीचको उत्कृष्ट रेकर्ड हो । 6. आजको खेल वानखेड़े स्टेडियममा हुदै छ । यहि मैदानमा २०११ मा भारतले श्रीलंकालाई पराजित गर्दै एक दिबशीय बिश्वकप जितेको थियो । ७. भारतीय टोली टि २० बिश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको यो तेस्रो पटक हो । २००७ मा भारत पहिलो पटक सेमिफाइनल पुगेको थियो र यहि बर्ष उसले विश्वकप पनि जितेको थियो । त्यसपछि भारत २०१४ मा2सेमिफाइनल पुगेको थियो तर उसले श्रीलंकासँग हार बेहोर्यो । ८. वेस्टइंडीज ४ पटक टि २० बिश्वकपको सेसिफाइनलमा पुगेको छ । २००९ र २०१४ को सेमिफाइनलमा वेस्टइन्डिज पराजित भएको थियो भने २०१२ मा उसले उपाधि चुमेको थियो । ९. आजको खेलमा भारत बिजयी भए भारत टि २० बिश्वकपको फाइनलमा ३ पटक प्रबेस गर्ने दोस्रो टोलि हुने छ । भारत यस अघि २०७ र २०१४ को फाइनलमा पुगेको थियो । …
१८ चैत्र २०७२, बिहीबार ०९:२७	0 940
‘महिला र पुरुष एक रथका दुई पांग्रा’ त्यसै भनिएको होइन । जब अबसर पाउछ तव दुबैले उतिक्कै प्रगति गर्न सक्छन । तर नेपालमा अझै पनि पुरातन सोच र ब्यबहार हावी छ जसले गर्दा महिलाहरु जहिले पनि पुरुषको नियन्त्रणमा छन् । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा केही मात्रमा महिला अधिकारका कुरा ब्यबहारमा लागु भए ता पनि ग्रामिण क्षेत्रको अबस्था एकदमै नाजुक छ । असक्षम, बोक्सी, दाइजो लगायत बिबिध निहुमा महिला आमा, दिदीबहिनीहरु दिनहु प्रताडित भैरहेका छन् । अबसर पाएमा महिलाहरुले पुरुषहरुले भन्दा पनि उत्कृष्ट काम गर्न सक्छन भन्ने केही उदाहरणहरु आज हामी प्रस्तुत गर्दै छौ । यी ६ नारी मध्ये केहीले नेपालको नाम बिश्वमा चिनाए भने केहिले नेपालको सस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै बिकासमा टेवा पुर्याए । १. अरुणा लामा नेपाली गायन क्षेत्रको एक सुप्रसिद्ध गायिका अरुणा लामालाई ‘स्वर किन्नरी’का रूपमा लिइन्छ । वि.सं. २००२ भाद्र २४ को दिन पिता सूर्यबहादुर लामा र माता सानमाया लामाबाट दार्जिलिङको घूम पहाडमा जन्मिएकी अरुणा लामाको पहिलो गीत ‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाईदेउ न’ थियो भने ‘किन यौवन उदास उदास छ मेरो’ भन्ने गीतबाट उनको गीति यात्रा अघि बढेको थियो। वेदना, पीडा र व्यथाका गीतहरूको साम्राज्ञी लामाको पहिलो गीत वि.सं. २०१२ देखि रेडियोमा बज्न सुरु गरेको थियो। उनले आफ्नो गायन कलाको लागि नेपाल र भारत दुवै देशबाट अनेकौँ पुरस्कारहरू पाएकी थिइन्। उनले सङ्गीत पुरस्कार, सुर श्रृङ्गार सम्मेलन पुरस्कार, मित्रसेन पुरस्कार, दिशारी पुरस्कार (कोलकता), भानु एकेडेमी पुरस्कार (दार्जिलिङ), नेपाली चलचित्र पुरस्कार (माइतीघर गीतको लागि), छिन्नलता गीत पुरस्कार, उर्वशीरङ्ग पुरस्कार, गोरखादक्षिण बाहु पुरस्कार, साधना पुरस्कार जस्ता थुप्रै पुरस्कारहरू पाएकी थिइन् । लामाको वि.सं. २०५४ माघ २२ गते बुधबारको दिन दुखद निधन भयो । २. अनुराधा कोइराला भारतीय कोठीहरूमा बेचिएका नेपाली चेलीबेटीहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनामा सक्रिय ‘माइती नेपाल’की संस्थापक अध्यक्ष हुन्- अनुराधा कोइराला । वि.सं. २००६ वैशाख २ गते ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा जन्मेका कोइरालाले वि.सं. २०६६ सालमा सीएनएन हिरो (CNN Hero) को उपाधि पनि जितेकी थिइन् । साथै उनले वि.सं. २०७० सालमा ‘मदर टेरेसा’ सम्मान पनि पाइन् । ३. पासाङ ल्हामु शेर्पा बि.सं. २०१७ साल मङ्सिर २५ गते सोलुखुम्बु जिल्लाको चौरीखर्क, लुक्ला सुर्के-४ मा जन्मिएकी पासाङ ल्हामु शेर्पा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने प्रथम नेपाली महिला हुन् । उनले बि.सं. २०५० साल वैशाख १० गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्। पासाङ ल्यामुको साहसको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले बि.सं. २०५९ साल वैशाख १० गते उनलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूती घोषित गरेको थियो। नेपाल …
ह्यारीमाथि ८ आरोप: नाङ्गो तस्बिरदेखि चिट चोरसम्म (फोटोसहित)
१७ चैत्र २०७२, बुधबार १०:२०	0 5,072
यतिबेला नेपालमा बेलायती राजकुमार ह्यारीको चौतर्फी वाहवाही भैरहेको छ । उनले खाएको खानादेखि बसेको घर र हरेक क्रियाकलाप नेपाली मिडियाका लागि ‘हट केक’ बनिरहेको छ । साताव्यापी भ्रमणका लागि नेपाल आएका उनले थप ६ दिन बसाइ लम्ब्याएका थिए । यस क्रममा उनले राष्टपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई भेट्नेदेखि गोरखाको बिकट गाउँमा समेत पुगेर ढुंगा काठ बोक्ने काम गरे । ह्यारी आज राती स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । हरेक मान्छेको राम्रो र नराम्रो गुण हुन्छ । यो नियमबाट कोही टाढा हुन् सक्दैनन् । मात्र थोरै र धेरै हो । सिमा नाघ्नु र नानाघ्नु मात्र हो । राजकुमार ह्यारीका पनि केही नराम्रा कुराहरु सार्वजनिक भएका छन् । उनीमाथि लागेका यी आरोपहरु आरोप मात्रै हुन् वा वास्तविक नै । त्यो समयले बताउला तर फोटोसहित सार्वजनिक भएका आरोपहरु भने नकार्न सकिन्न । उनीमाथि नाङ्गो मस्तीदेखि चिट चोरेर क्लास उतिर्ण गरेको सम्म आरोप लागेको छ । पढ्नुस उनीमाथि लागेका यी ८ आरोप । १. हिटलरको भेषमा ह्यारी सन् २००५ मा राजकुमार ह्यारीका साथीले आयोजना गरेको एउटा पार्टीमा ह्यारी हिटलरले लगाउने पहिरनमा देखिए । उनको यो पहिरन सहितको तस्विर विश्वभर बिबादास्पद बनेपछि उनले सार्बजनिक रुपमा माफि मागे । माफि माग्दा उनले भने- ‘मेरा कारणले कसैलाई चोट पर्न गएको खण्डमा माफि चाहन्छु ।” २. नांगो तस्विर सन् २०१२ मा ह्यारीको नांगो तस्विर सार्वजनिक भयो । लस भेगासमा पार्टिमा मस्त ह्यारीको नागों फोटो उनका कुनै साथिले लिक गरिदिएका थिए । फोटोमा उनि अर्को नांगो ब्यक्तिलाई अंगालो मारिरहेका देखिन्छन् । ३. पाकिस्तानी सैनिकलाई हेपेको आरोप सन् २००६ मा एक भिडियो सार्वजनिक भयो । भिडियोमा ह्यारी सैनिक पोशाकमा तालिममा जानका लागि विमानस्थलमा कुरिरहेको अवस्थामा देखिन्छन् । यसैबीच उनले सहकर्मी सैनिकलाई हाम्रो सानो पाकि साथी खै भन्दछन । जबकि पाकि भन्ने शब्द पाकिस्तानीहरुलाई हेपेर भनिने शब्द हो । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि ह्यारीलाई हेपाहा प्रवृत्तिको मान्छे भन्ने आरोप लाग्यो । ४. जनावरमाथि अत्याचारको आरोप राजकुमार ह्यारी पोलो खेलमा निकै रुचि राख्दथे । सन् २०१० मा एक पोलो खेलमा ह्यारी चढेको घोडा रक्ताम्य भएर साईड लिन खोज्दा समेत ह्यारीले लगातार दबाब दिएर खेलेपछि उनीमाथी जनावर अधिकारवादीहरुले जनावरमाथि अत्याचार गरेको भन्दे निर्दयी मानिस भनेर आरोप लगाए । ५. चिट चोरेर पास गरेको आरोप अध्ययनमा कमजोर ह्यारीले सन् २००५ मा चिट चोरेर ए लेभल पास गरेको आरोप लाग्यो । परिक्षा समय सकिए पनि त्यहाँ निरिक्षणकर्ताको रुपमा रहेका …
असाध्यै अशुभ मानिने ६ सपना
१६ चैत्र २०७२, मंगलवार १३:२९	0 553
हामी दिनहु बिभिन्न प्रकारका सपना देख्छौ । राम्रो लागेको सपना पूरा भैदिए हुन्छ भन्छौ र नराम्रो सपना केही नहोस भन्छौ । सपनाको फलका ’boutमा थुप्रै विचार र भनाइहरु छन् । यसका ’boutमा शास्त्रहरुमा पनि उल्लेख छन् । रामायण वा महाभारतमा पनि सपनालाई आउने संकेतको रुपमा लिएको छ । भगवान रामले दशरथको मृत्युको समयमा एक अशुभ सपना देखेर अनुमान लगाएका थिए कि राजभवनमा केही अशुभ हुँदैछ भनेर । रावणले पनि आफु मारिनु अघि सपनामा असुभ संकेत देखेका थिए । शास्त्रअनुसार सपनालाई भविष्यमा हुने घटनाको संकेत मानिन्छ । बिभिन्न सूचकका आधारमा सपनाको संकेत छुट्याइएको हुन्छ । १. काग देख्नु सपनामा काग देख्नुलाई असुभ फलदायी मानिन्छ । यसलाई मृत्युको संकेत पनि मानिदै आएको छ । यदि सपनामा काग देख्नुभयो भने तपाईले नजिकैको मानिस मुत्यु भएको आदि समाचारहरु सुन्नुपर्ने हुन्छ् । २. आफैलाई यात्रा गर्दै गरेको देख्नु सपनामा आफैलाई यात्रा गर्दै गरेको देख्नु पनि त्यतिको राम्रो मानिदैन । कुनै नराम्रो घटना हुन सक्ने हुँदा जुन दिन सपना देखिएको छ त्यसै दिन यात्रामा जानु छ भने सकेसम्म यात्रा नै स्थगित गर्नु राम्रो मानिन्छ । ३. बाजा बजाएको वा कपाल मुण्डन गरेको देख्नु सपनामा बाजा बजाएको वा कपाल मुण्डन गरेको देख्नुलाइ पनि राम्रो संकेत मानिदैन । यदि आफ्नै मुण्डन गरेको देख्नुभयो भने त्यसले आफ्नै परिवारको सदस्यको मृत्युको संकेत गर्छ । ४. सेतो फुलको माला लगाइदिनु सपनामा कोही महिला आएर तपाईंलाई सेतो फूलको माला लगाइ दिइन भने निकै असुभ हुने संकेतको रुपमा मानिन्छ । ५. तेल लगाउनु वा गधाको सवारी देख्नु सपनामा तेल लगाउनु वा गधाको सवारी देख्नुलाई पनि मृत्युको सुचक मानिन्छ । ६. सेतो बस्त्र र छरिएको खुल्ला कपालमा महिलालाई देख्नु कुनै महिला सपनामा सेता वस्त्र र छरिएको कपालमा देखिइन भने यसलाई वियोगका सपना मानिन्छ । यो पढ्नु भयो ? यस्तो सपना देख्नु भयो भने बिपनामा धन प्राप्त हुन्छ (२० सपना) यस्तो १० सपना जसले मृत्युको संकेत गर्छ यस्ता ७८ सपना हुन्छन् खतरनाक
१५ चैत्र २०७२, सोमबार १५:३९	0 665
भूत भन्ने बितिक्कै हाम्रो आङ् जिरिंग हुन्छ, रौहरु ठाडो हुन्छन । अझ रातको समयमा भूतको कहानी र कथाहरु सुन्नु पर्छ रातभर निन्द्रा लाग्दैन । कोही कोही त राती नै भूत भनेर चिच्याउछन् । किचकन्याले सताएको प्रसङ्गहरु त थुप्रै सुनिन्छ । भूत भन्ने बितिक्कै हाम्रो दिमागमा एउटा अनौठो भयानक डरलाग्दो दृश्य छचल्किन थाल्छ । तपाईलाई लाग्न सक्छ साच्चीकै भुत हुन्छन् त ? विश्वमा सुचना र प्रविधीले निकै फड्को मारीसके पनि मनिसहरुको मन परिर्वतन भएको छैन् । समाजमा भुतको चर्चा गरेको तपाई हामीले सुन्नेगरेकै छौ । तर विश्वास की नगर्ने भुत हुन्छ भनेर हेलोविन देखी चिनियाँ घोस्ट फेस्टिवल सम्म भुतको खुव चर्चा हुने पाईन्छ । तर भुतको अस्तित्व ’boutमा लडाई भने हजारौ वर्षदेखि जारी छ । भुत छ र छैन् भनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । देखे भोगेकाहरुको कहानी र कथालाई मान्ने हो भने भूत धेरै प्रकारका हुन्छन । पछिल्लो समय जन घनत्व बढेसंगै भूत हट्दै गएको धेरैको बुझाइ छ । आखिर जे होस्, कतिपयलाई बिश्वास लाग्ला त कतिपयलाई नलाग्ला तर यहाँ एक भिडियोमा नेपालमा सबै भन्दा बढी भूत भेटिने ५ ठाउँको चर्चा गरिएको छ । जसमा राजदरबारदेखि सागरमाथासम्मका ठाउँहरु समेटिएका छन् । हेर्नुस भिडियो यो पढ्न छुट्यो कि ? किचकन्यासँग रोमान्स गरेको भिडियो भाइरल (हेर्नुहोस् भिडियो)
१५ चैत्र २०७२, सोमबार १२:५९	0 355
मान्छेहरुको सिर्जना र चाहना पनि अनेक खालको हुन्छ । कतिपय सिर्जना र चाहनाहरु यस्तो हुन्छन जुन पत्याउनै मुस्किल हुन्छ । यस्तै एउटा सिर्जना भएको छ अमेरिकाको कोस्टारिकामा । त्यहाका एक व्यक्तिले जमिनमुनी रमणीय जीवनशैली बिताईरहेका छन् । उनले घर मात्रै बनाएका छैनन् त्यस भित्र अनेक रोचक कलात्मक सिर्जनाहरु समेत बनाएका छन् । कोस्टारिकाको सेन इसिड्रो डी परेज जेलेडन निवासी म्यानुअल ब्यारेन्ट्सले १२ वर्षसम्म लगातार ढुंगा काटेर पहाडभित्रै गुफाजस्तो तर निकै सुन्दर घर बनाएका छन् । उनको यस घरमा ३ वटा बेडरुम, १ डाइनिङ रुमसहितको सुविधा छ, जुन एक आलिशान महलमा उपलब्ध हुन्छन् । म्यानुअलको परिवार २ हजार स्क्वायर फिटमा बनेको यस घरमा रहन्छ, जसलाई ज्वालामुखी चट्टान काटेर बनाइएको हो । उनले यस घरको नाम टोपोलाण्डिया (Topolandia) राखेका छन् । यी तस्बिरहरु एक फोटोग्राफरले क्लिक गरेका हुन्, जसलाई म्यानुअलले आफ्नो घर देखाउन निमन्त्रणा दिएका थिए ।
१४ चैत्र २०७२, आईतवार १६:५९	0 1,595
फिल्म हेर्न हलमा पुगेका कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल भक्कानिएर रोए, त्यो पनि टिभीको क्यामेराकै अगाडि । त्यसपछि के चाहियो र पत्रपत्रिका, अनलाइन, टिभी सबैतिर मन्त्री गजुरेलको रुवाइ भाइरल बन्यो । कतिपयले उनको रुवाइलाई टोपलेको भनेर संज्ञा दिए भने कतिपयले कोमल मन भएको मन्त्री भनेर बचाउ पनि गरे । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको कथा रहेको राहदानी चलचित्र हेरेर कृषिमन्त्री गजुरेल रोएका हुन् । बिहीबार काठमाडौंको सिटी सेन्टरमा राहदानी चलचित्र हेरेर फर्केका उनी एक टिभीलाई अन्तरबार्ता दिदा दिंदै भक्कानिएका थिए । नेपालमै केही गरौं भनि ऋण लिएर गाई पालन गरेका युवा गोठमा गाई मरेपछि विभिन्न समस्या परेर बाध्य भई विदेश जानु परेको चलचित्रको दृष्यले मन्त्रीको मन पोलेको रहेछ । स्मरणीय त के हो भने उनी १० बर्षसम्म युद्द गरेर आएका नेता हुन् । यसैकारण पनि कतिपयले उनको रुवाइलाई ‘स्वाङ्’ परेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘जनयुद्दमा हजारौ नेपाली मर्दा वास्ता नगर्ने अहिले नाटक गर्ने’ कतिपय यस्तै भनिरहेका छन् । त्यसो त सर्वसाधारणले मात्रै होइन कलाकारले पनि उनको रुवाइलाई मज्जैले उडाई दिएका छन् । मन्त्री गजुरेलको नक्कल गर्दै हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले दिएको अन्तरबार्ता भिडियो युट्युब भाइरल बनिरहेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो यसरी रोएका थिए मन्त्री गजुरेल
१४ चैत्र २०७२, आईतवार ११:२२	0 441
अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको द्वन्द चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । यस अघि अमेरिकाको न्युयोर्क सहर उडाउने चेतावनी दिएको कोरियाले यस पटक ‘अन्तिम अवसर’ भन्दै ४ मिनेट लामो चेतावनीयुक्त प्रोपोगान्डा भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । भिडियोमा मिसाइल आक्रमणमार्फत अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी नष्ट गरेको देखाइएको छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार भिडियोमा ‘अमेरिकाले अब दुईमा एक छनौट गर्नु पर्ने छ, अमेरिकाको अवशेष यो धर्तिमा रहने कि सधैको लागि समाप्त हुने, यो सबै अमेरिकाको हातमा छ’ भनिएको छ । उत्तर कोरियाको यो भिडियो अमेरिका र चिर प्रतिद्वन्दी दक्षिण कोरियाको बिरुद्दमा सार्वजनिक गरिएको हो । गएको जनवरीमा परमाणु परीक्षणका साथै लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने रकेट प्रक्षेपण गरेको उत्तर कोरियाले सार्वजनिक गरेको प्रोपोगान्डा भिडियोले अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, दक्षिण कोरियालाई थप तनाब दिएको छ । दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले उत्तर कोरियाको सिमा नजिक संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएकाले बिरोध जनाउदै उत्तर कोरियाले पछिल्लो पटक चेतावनी स्वरूप शक्ति प्रदशन गर्दै आएको छ । दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको सैन्य प्रदर्शन तत्काल रोक्न पटक पटक चेतावनी दिंदा पनि नरोकेपछि उत्तर कोरियाले हिँसाको बाटो अंगाल्न खोजेको जनाएको छ । उत्तर कोरियाका राष्टपति किम जोंङ्ले अमेरिका र दक्षिण कोरिया माथि जुनसुकै बेला पनि आक्रमण गर्न पर्ने भएकाले तयार रहन सैनिकहरुलाई आदेश दिइसकेका छन् । हेर्नुस भिडियो
चिया खानुअघि ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा
१३ चैत्र २०७२, शनिबार १३:३६	0 1,482
कोही आफन्त अथवा साथीभाई भेट्ने बितिक्कै हामी सर्वप्रथम चियाको अफर गर्छौ । घरमा कोही आयो भने पनि सुरुमा चिया नै ख्वाउछौ । हामी अरु कसैकोमा गए पनि सुरुमा चिया नै खान्छौ । बिहान उठ्ने बितिक्कै चिया खाने धेरैको बानी छ । अझ कतिपय त बेडमै चिया मगाएर खाने गर्छन । बिहान चिया, खाना खाएर अफिस पुगेपछि पनि चिया, अनि खाजासंगै पनि चिया, खाजापछि पनि अफिसमा चिया, अनि बेलुका घर फर्किन पनि चिया । यी त अफिस भित्र काम गर्ने कर्मचारीको कुरा । अफिर बाहिर काम गर्नेहरुले त झन् यो भन्दा बढी चिया खान्छन । कोही मान्छे भेट्ने बितिक्कै चियागफ सुरु भैहाल्छ । लेमन, ग्रीन टी, मिल्क टी लगायतका आ आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । तर मान्छेहरु आफ्नो रुची र अरुको लहलहैमा यी चियाहरु सेवन गरिरहेका हुन्छन । चिया पनि एकखाले नशा नै हो । चियाको महात्म्य भनि साध्य छैन । तर यही चिया आफ्नो स्वास्थ्य अनुसार मिलाएर पिउन सकिएन भने यसले ठूलो असर गर्छ । अझ बिहान खाली पेटमा त चिया खानै नहुने अध्ययनहरुले देखाएको छ । एक अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार हाम्रो देशको करिब ८० देखि ९० प्रतिशत जनसंख्या विहान उठ्ने वित्तिकै चिया पिउछन । विशेष गरी गर्मी मौसममा खाली पेटमा चिया पिउदा स्वास्थ्यमा हानि हुने समेत पत्ता लागेको छ । तसर्थ बिहान चिया पिउने नै हो भने तपाईले विहान उठेर हल्का नास्ता खाइ सकेपछि मात्र चिया पिउनु राम्रो हुन्छ । चिया खाँदा ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा १. बिहान खाली पेटमा स्ट्रगं टी पिउन मनपर्छ भने सावधानी अपनाउनुस् । धेरै स्ट्रगं चिया पिउनेलाई अल्सर हुने खतरा हुन्छ । यसले पेटभित्र घाउ बनाउने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ । २. कैयौ मानिस एकैपटक धेरै चिया बनाउँछन् । र त्यसलाई पटकपटक उमालेर पिउने गर्छन् । पटकपटक तताएर चिया पिउनु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुनसक्छ । ३. अधिकांश मानिस दूध चिया पिउने गर्दछन् । तर, कमैलाई मात्र थाहा छ कि खाली पेट दूध चिया पिउँदा चाँडै थकान महसुस हुन्छ । साथै व्यवहारमा चिडचिडापन (रिसाउने) स्वाभाव आदि आउँछ । ४. विहान उठेर खाली पेटमा चिया पिउदा पाचन प्रक्रियामा अप्ठेरो पार्न सक्छ । जसले तपाईलाई वान्ता हुनसक्छ र अप्ठेरो महसुस हुनसक्छ । ५. सामान्यतया ब्ल्याक टि लाई स्वास्थ्यको हितमा मानिन्छ । तर, अत्याधिक पिएमा हानी पनि गर्नसक्छ । ब्ल्याक टि पिउँदा तौल घट्छ तर, पेट फुल्छ भने भोक लाग्दैन् ।
भुलेर पनि जुत्ता लगाएर जान नहुने ७ ठाउँ
१२ चैत्र २०७२, शुक्रबार १२:४०	0 589
हामी जहा पुग्छौ जुत्ता पनि त्यहि पुग्छ । त्यसो त हामी जतिसुकै सफा सुग्घर ठाउँमा पुगे पनि जुत्ताले भुइमै टेकेर हिड्नु पर्छ त्यसैले यो सबै भन्दा फोहोर हुन्छ । फोहोरले नै रोगब्याधि र संक्रमण निम्त्याउछ । त्यसैले त फोहोरबाट जोगिनु पर्छ । फोहोरबाट मान्छे मात्रै होइन भगवान पनि रिसाउछन् त्यसो त जुत्ता लगाएर मन्दिरमा पस्नु हुदैन भन्ने मान्यता रही आएको छ । हाम्रो समाजमा यस्ता थुप्रै मान्यताहरु रहेका छन् । कतै भगवान रिसाउने भनिएको छ भने कतै भगवानले सराप्ने लगायतका बिश्वास गरिन्छ । धारमा बिश्वास गर्नुस वा नगर्नु स्त्यो तपाइको अधिकारको कुरा हो तर फोहोर बच्नु तपाइको लागि अति आवश्यक कुरा हो । यसका ’boutमा बिभिन्न धर्मशास्त्रहरु बिभिन्न कुराहरु उल्लेख छन् । यी ५ स्थानमा यदि जुत्ता वा चप्पल लगाएर गएमा अशुभ हुने कुरा समेत बताइएको छ । यदि वेवास्ता गरेर हामिले जुत्ता चप्पल लगाएरै यी स्थानमा गयौ भने हामिलाई बिभिन्न प्रकारका दुख कष्टहरु आउन सक्ने बताइएको छ । त्यसैले जानीराखौं कुन कुन स्थानमा जुत्ता चप्पल लगाएर जानु हुदैन । १. ढुकुटी ढुकुटी भएको स्थान जहा देवी लक्ष्मीको वास हुन्छ भन्ने गरिन्छ त्यसैले ढुकुटी भएको स्थानमा कहिले पनि जुत्ता चप्पल लगाएर नजानुस् । २. मन्दिर एक पवित्र स्थल हो । मन्दिरमा यदि जुत्ता चप्पल लगाएर गयौ भने देबता हामिसँग रिसाउनुहुन्छ भन्ने गरिन्छ । त्यसैले हामीले मन्दिर जाँदा भूलेर जुत्ता वा चप्पल लगाएर जानु हुदैन । ३. भान्छा घर शास्त्रानुसार अग्नि र अन्न दुवैलाइ देवता समान मानिएको छ । त्यसैले भान्छा घरमा पनि जुत्ता चप्पल भूलेर पनि लानु हुदैन । भान्छा भन्ने बितिक्कै खानेकुरासंग जोडिन्छ त्यसैले फोहोर हुने भएकाले पनि जुत्ता लगाउन हुन्न । ४. नदि नदिमा पनि जुत्ता चप्पल लाएर जानु हुदैन । नदीलाई पनि पवित्र स्थान मानिएकाले नदि प्रवेश गर्नु पूर्व जुत्ता चप्पल खोल्नुका साथै कुनै पनि छालाको वस्तु पहिरनु भएको छ भने फुकालेर मात्र प्रवेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ । ५. स्टोर अर्थात भण्डार घर भण्डारमा पनि जुत्ता चप्पलको प्रयोग गर्नु हुदैन,यो कुरामा ख्याल गर्ने मानिसको घरमा कहिले पनि अन्न पात टुट्दैन भनिएको छ । यो पढ्न छुट्यो कि ? बिश्वकै खराब १० झण्डा, नेपालको पनि (भिडियो)
१२ चैत्र २०७२, शुक्रबार ०९:५६	0 2,530
कुनै पनि देशको सबै भन्दा ठूलो पहिचान हो- झण्डा । झण्डाले नै देशलाई चिनाउछ । कुनै पनि नागरिक आफ्नो देशको झण्डाको दुरुपयोग गरेको चाहदैन । तर यहाँ दुई जना बिदेशी नागरिकले बिभिन्न १० देशका झण्डालाई बिश्वकै खराब झण्डा भनेर भिडियो बनाएका छन् । ज्याक्स फिल्मले युट्युबमा हालेको यो भिडियो ६ लाख बढी पटक हेरिएको छ । यो कुनै अध्ययन, सर्वेक्षण र अनुसन्धान भन्दा पनि एउटा रमाईलोका लागि बनाइएको ‘कमेडी’ भिडियो हो । उनीहरुले बनाएको सूचीमा नेपालको झण्डा दशौ स्थानमा रहेका छन् । अन्य झण्डाहरु ग्रिनल्यान्ड, अलास्का, एन्टीगो, कोलोम्बिया, न्युमेरो लगायत देशका झण्डा रहेका छन् । हेर्नुस भिडियो नेपाली झण्डाका ’boutमा चारकुने आकार नभएको एक मात्र राष्ट्रिय झण्डा हो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा । नेपालको झण्डा दुई त्रिकोण (एक माथि अर्को) मिलेर बनेको छ । माथिल्लो त्रिकोणमा अर्ध चन्द्र र तल्लोमा सुर्य छ, जसले आकाशमा चन्द्र र सुर्य रहुन्जेल नेपाल रहीरहने कुरालाई जनाउँछ । नीलो किनारा शान्तिको प्रतिक हो र सिम्रिक रङ नेपालको राष्ट्रिय रङ हो । सनातन धर्मावलम्बी हिन्दूहरूको मान्यताअनुसार छत्र (छाता), ध्वज (ध्वजा वा झ्ण्डा), चामर (चमर वा पङ्खा) र कार्मुक (धनु) सनातनदेखि नै राष्ट्र वा राज्यका राजकीय प्रतीक वा चिह्नका रूपमा चिनिँदै आएका हुन्। राजाहरू आ-आफ्ना राष्ट्र वा राज्यका प्रतीक वा चिह्न लिएर राजकीय यात्रामा निस्कन्थे । लडाइँका मैदानमा पनि कुनै राजाको छत्र, ध्वज, चामर वा कार्मुक भाँचिदिन सफल हुनुको अर्थ हुन्थ्यो, त्यस राज्य उपर विजय। राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा “म जसै अर्काको छत्र-भङ्ग गर्न भनी जान्छु, त्यसैवेला मेरो छत्रलाई भङ्ग गर्न यहाँ अर्को राजा आयो भने के-कसो होला?” भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। यिनको यस भनाइबाट त्यतिवेला राष्ट्रध्वज वा राष्ट्रिय-झ्ण्डाको भन्दा राजछत्रको बढी महत्व हुने गरेको छनक पाइन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय-ध्वजा वा राष्ट्रिय-झण्डाको चलन कहिलेदेखि शुरु भयो, निश्चित भन्न सकिँदैन। लिच्छवि राजाहरूले आफूलाई लिच्छवि-कुलकेतुः अर्थात् लिच्छवि-कुलको झ्ण्डाजस्तो भनी चिनाउने गरेका थिए। यसबाट त्यतिवेला नै नेपालमा केतु अर्थात् ध्वजाको प्रचलन थियो भन्न सकिन्छ। इन्द्रजात्राको दिन इन्द्रध्वज फहराउने परम्परा आजसम्म चलिआएकै छ । हाम्रा सम्पूर्ण वैदिकवाङ्मय सूर्य तथा चन्द्रका गुणगानले भरिभराउ छन्। पहिलेका राजाहरूले आफ्नो राजवंशलाई सूर्य-वंश वा चन्द्र-वंश मान्दै आएका थिए। वि.सं. ७९२ (संवत् १५९)मा राजा जयदेव (द्वितीय)ले पशुपतिको मन्दिरमा राखेको शिलालेखमा “ब्रह्माका पनाति भगवान् सूर्यबाट आफ्नो इक्ष्वाकु-कुलको आरम्भ भई यसै कुलमा आफ्नो जन्म भएको” उल्लेख गराएका छन् । लिच्छवि राजाहरूले आफ्नो उच्चताको प्रतीकका रूपमा राष्ट्रको झ्ण्डामा …
११ चैत्र २०७२, बिहीबार १५:५३	0 564
गीत सुन्दा लाग्छ उनी ‘डिप लभ’ बाट ट्राजिडी भएकी छिन् । उनलाई कसैले ठूलो पीडा दिएको छ । र त उनी भन्दैछिन ‘तिमीले बाटो फेर्यौ अरे…’ । एकदमै प्रेम बिछोडपछिको बेदना मिश्रित यो गीतले धेरै युवायुवतीको मन छुन्छ । प्रेम बिछोड भोगेकाहरु गीत सुन्दै आँसु चुहाउछ । तर गीतमा दिइएको स्वर भने सक्कली हो भनेर कसैले पत्याउदैन । तर नपत्याई सुखी छैन । सबैलाई अतित सम्झाएर सोच्न बाध्य पार्ने यी नानी हुन् ७ बर्षीय जिग्मे छ्योकी घिसीङ । सानी नानी उनी कक्षा ३ मा पढ्छिन । तर यो गीत चर्चामा आएसंगै उनको चर्चा निकै उक्लिएको छ । युट्युबको एउटा च्यानलमा मात्रै उनको गीत तीन दिनमै साढे २४ हजार भन्दा बढीले हेरेका छन् । उनमा वाद्ययन्त्र हार्मोनियन आफै वजाएर गाउने क्षमता पनि छ । बारा निजगढ घर भएकी घिसिङ अहिले आमा बसन्ती लामासँग काठमाडौं स्वयंम्भुमा बस्दै आएकी छन्। बाबु रामकाजी घिसिङ कोरियामा कामको सिलसिलामा छन् । उनको सुरिलो स्वर सुनेर युट्युबमा थुप्रै प्रशंसा र शुभकामना पोखिएका छन् । हेर्नुस युट्युबमा उनको प्रशंसा गीत हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
निन्द्रा लागेपछि यसरी होसै हराउछन मान्छे (हेर्नुस् १२ फोटो)
११ चैत्र २०७२, बिहीबार ०९:२३	0 609
भोक, प्यास अनि निन्द्रा सबै प्राणिका लागि उतिक्कै अत्याबश्यक ‘अमृत’ हुन् । यसलाई न कसै गरि रोक्न सकिन्छ न त त्याग्न नै । तर कतिपयलाई भने अचाक्ली रुपमै यसको प्यास लाग्ने गर्दछ । बिबिध कारणबश बढी भोक लाग्ने, बढी प्यास लाग्ने र बढी निन्द्रा लाग्ने गर्दछ । यसले शरीर अस्वस्थ्य भएको संकेत गर्दछ । बिभिन्न रोगको संक्रमण र ब्यबहारमा हुने गडबडीले मान्छेलाई अत्यधिक रुपमा निन्द्रा लाग्छ । यसरी निन्द्रा लागेपछि काम गर्दा गर्दै मात्रै होइन बोल्दा बोल्दै, खाँदा खादै र हिड्दा हिंड्दै समेत निदाउछन् मान्छे । यसरी निन्द्रा लाग्दा आफु के गर्दैछु भन्ने होसै हराउछन् मान्छे । कहिलेकाँही राती निन्द्रा पुगेन भने दिउँसो निद्रा लाग्नु स्वभाविकै हो । तर जब मध्य दिउँसो हुन्छ तब झपक्क निन्द्रा लाग्नु, दोहो¥याइ तेह¥याइ हाइ आउनु कामका लागि हानि हुन्छ । प्रायजसो दिउँसो नै धेरै काम गर्ने भएकाले पनि दिउँसोमा निन्द्रा लाग्ने समस्या भएकाले काम गर्न समेत अप्ठेरो परिरहेको हुन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार दिउँसो मध्यान्हमा मानिसको शरीरको उर्जाको मात्रा घट्दै जान्छ । काम गर्दै जाँदा शरीरको उर्जा पनि कम हुँदै जाने भएकाले दिउँसो निन्द्रा लाग्ने गरेको हो । दिउँसोमा थोरै सुत्नु नराम्रो कुराचाँहि होइन तर धेरै निदाउनु भने स्वास्थ्यको लागि लाभदायिक मानिँदैन । दिउँसो निन्द्रा बढी लाग्नुको कारण अघिल्लो रात राम्ररी निन्द्रा नलाग्नु, आफ्नु रुचीविपरीत काम गर्नु हो । अर्को कारण कुनै रोगको उपचारमा औषधि सेवन गर्नाले पनि दिउँसो निन्द्रा लाग्छ । विशेषगरि डिप्रेशनको उपचारमा सेवन गरिने औषधी, चिसोको उपचार तथा एलर्जीको उपचारमा खाइने औषधिले पनि निकै निन्द्रा लगाउँछ । दिउँसोमा कोठाभित्र गुम्सिएर बस्ने, घाम र हावामा नबस्नाले पनि दिउँसो निन्द्रा लाग्छ । लामो समयसम्म एक्लै बसिरहनाले पनि दिउँसोमा निन्द्रा लाग्छ । अँध्यारो ठाउँमा गुम्सिएर बस्ने मानिसमा जोर्नी दुख्ने समस्या पनि हुन्छ । तपार्इंलाई दिउँसो निन्द्रा लागेर धेरै समस्या खडा भएको छ भने शुरुमा खाने, सुत्ने आनीबानीमा ध्यान दिनुपर्छ । दैनिक पर्याप्त व्यायाम गर्ने, सन्तुलित भोजन गर्ने र पानी पटक–पटक पिइरहनाले पनि दिउँसो निदाउने बानीको सुधार हुन्छ । हेर्नुस निन्द्रा लागेपछि कसरी होसै हराउछन मान्छे